Sida loo ciyaaro Blackjack - UK 2021 ✅
Home » Ciyaaraha Casino » Blackjack » Sida loo ciyaaro Blackjack
Maxay yihiin Xeerarka Aasaasiga ah ee Ciyaarta Xusuusta?
Kala duwanaanshaha Blackjack waa inaad ogaataa
Anshaxa miiska Blackjack
Marka ay timaado khilaafaadka ugu fiican ee ku guuleysiga casino, ciyaarta blackjack waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah kuwa ugu fiican. Iyada oo ay gameplay fudud iyo a ‘ aqal aqal la maamuli karo ‘Boqolkiiba 1 boqolkiiba oo ka mid ah casinos badan, ciyaarta blackjack waxay si isdaba joog ah u soo jiidatay ciyaartoy qaabab ciyaareedyo kala duwan leh iyo qancin.
Laakiin tani maahan oo kaliya sababta kaararka ciyaartan ay caan ugu yihiin dadka xiiseeya ee doonaya inay garaacaan khamaarka. Helitaanka xeelado hal abuur leh oo si fudud loo-raaco sida tirinta kaararka ayaa u oggolaaneysa ciyaartoyda inay ka faa’iideystaan ciyaarta oo ay garaacaan guriga.
In kasta oo ay u muuqato in ku guuleysiga ciyaarta blackjack ay fududahay ugu yaraan warqad, mid waa inuu maanka ku hayaa in guusha dhabta ah ee miiska casino ay wali u baahan tahay dulqaad, adkaysi iyo dabeecad ku habboon ciyaarta. Xitaa waa shardi in si buuxda loo fahmo gameplay iyo sharciyada ciyaarta.
Haddii aad raadineyso inaad si buuxda u fahamto ciyaarta oo aad rabto natiijooyin, markaa tilmaamaha soo socda ayaa kuu caddayn kara waxtar.
Ciyaarta blackjack, ciyaartoydu waxay damacsan yihiin inay garaacaan qiimaha gacanta ama ku dhow 21. Si tan ay u dhacdo, ciyaartoydu waxay u baahan doonaan inay abuuraan isku-darka saxda ah ee kaararka. Ciyaartan miiska, nidaamka guud waa in la isticmaalo ugu yaraan hal shaashad 52-kaar oo caadi ah, kaar walbana wuxuu la yimaadaa qiime loo qoondeeyay.
Kaararka laga bilaabo 2 ilaa 10 ayaa sii hayn doona qiimaha wajigooda. Kings, Queens, iyo Jacks waxay qaadan doonaan qiimaha ’10’, iyo Aces of deck waxay heli doonaan qiimaha ‘1’ ama ’11’. Isku darka badan ee lagu sameyn karo kulankaan, gacanta ugu fiican waa labo-kaar ’21’ ama blackjack.
Ciyaartan, laacib heli doona blackjack wuxuu ku raaxeysan doonaa bixinta 3-2. Tani waxay ka dhigan tahay in haddii laacib sharad ku dhigto $ 6 ciyaarta isla markaana uu guuleysto, inuu gurigiisa qaadan doono $ 9. Hadda, haddii ganacsade khamaarka sidoo kale ku faano labo-kaar ’21’ oo ay riixdo ama xiriiriso, markaa ciyaaryahanka kaliya wuxuu helayaa qamaarkiisa. Laakiin haddii ganacsade khamaarka uu sawiro ’21’ oo uu gacanta ku haysto in ka badan 3 kaar, markaa blackjack ciyaaryahanka ayaa loo arkaa inuu ka fiican yahay. Sidaas ciyaaryahanka ayaa ku raaxeysan doona bixinta 3-2.
Dhaqan ahaan, ciyaartan waxaa lagu ciyaaraa miis qaab-dhismeed u eg, miis walbana wuxuu qaadan karaa ilaa 7 ciyaartoy. Haddii aad u fiirsato naqshadeynta iyo qaabeynta miiska blackjack, waxaad ogaan doontaa in geeska miiska uu ku yaallo calaamadda oo si faahfaahsan u sharraxeysa kala duwanaanshaha sharadka. Shaxda sidoo kale waxaa ku jiri doona macluumaad yar ama sharciyo ka caawin kara ciyaartoydu inay ciyaaraan ciyaarta.
Adeegsiga sawirka kore, waxay muujineysaa xaqiiqda ah in ganacsade waa inuu sawiro ’16’ oo uu istaago ’17’, ama bixinta waa 2 ilaa 1. Marka la soo koobo, ciyaartoydu waa inay ka feejignaadaan sharciyada lagu muujiyey miiska ka hor intaanay isku deyin inay ku ciyaaraan lacag dhab ah.
Ciyaar dhaqameed dhaqameed, ganacsadaha khamaarka wuxuu heli doonaa afarta ilaa sideed kaar oo lagu ciyaaro. Isla markii isku shaandheynta kaararka, kaararkaan ciyaarey ka dib waxaa la gelinayaa kabo halkaas oo ganacsadaha loo xilsaaray uu qaadan doono hal kaar markiiba.
Kahor bilowga ciyaarta, ciyaartooyda waxaa laga filayaa inay miiska saaraan miiska iyagoo ku dhejinaya jajab baraha lagu ciyaaro. Ka dib marka ciyaartoyda oo dhan ay miiska u qoondeeyaan sharadooda, ciyaartoyda iyo ganacsadaha waxaa la siiyaa labo kaar. Markaad ciyaareyso ciyaarta kabaha, kaararka lala macaamilay dhamaan ciyaartoyda waxaa la siinayaa waji, ciyaartoydana looma ogola inay taabtaan kaararka.
Laakiin haddii midkood uu ciyaarayo hal-laba-geesoodka blackjack-ka ee gacanta laga qabtay, kaararka waxaa la siinayaa waji-hoos, ciyaartoydana waxaa loo oggol yahay inay taabtaan ama soo qaataan kaararka. Labada xaaladoodba, ciyaartoydu waxay ku kalsoonaan karaan hal kaar oo la soo hordhigay si ay ciyaartoy kale u hubiyaan.
Ka dib oo dhan, kaararka ayaa loo xilsaaray; Ciyaartoyda waxaa markaa la siiyaa fursad ah sida ay ugu ciyaari doonaan gacmaha sida waafaqsan qawaaniinta ciyaarta. Iyada oo ku saleysan xeerarka caadiga ah ee ciyaarta, ganacsadaha ayaa la filayaa inuu sawiro kaarar dheeri ah oo wadarta gacantiisa ay tahay 16 ama wax ka yar, waxaana la filayaa inuu istaago haddii qiimaha gacanta ay ugu yaraan tahay 17.
Kasiinooyinka kale waxay yeelan karaan sharciyo gaar ah oo tan ku saabsan, sidaa darteed waxaa ugu wanaagsan in la xaqiijiyo xeerarka ka hor inta aan la isku dayin inaad lacag dhab ah dhigto. Waa kuwan eeg deg deg ah qaar ka mid ah go’aannada ay ganacsadaha ama ciyaartoydu ay sameyn karaan inta lagu jiro ciyaarta dhabta ah ee blackjack.
Ku dhufo. Tani waa ikhtiyaarka ciyaartoy badan oo doonaya inay hagaajiyaan fursadahooda helitaanka ’21’ ama ku dhow taas. Ciyaaryahan doorta xulashadan ayaa qaadan doona kaar si kor loogu qaado qiimaha gacanta. Haddiise sawirka kaarka ka dib uu qiimuhu ka bato ’21’, laacibku wuu busbusanayaa oo wuu luminayaa bahalka.
Istaag . Haddii aad go’aansato inaad istaagto, waxaad ku dhegeysan doontaa qiimaha gacanta ee aad sameysay.
Labo Jibaar . Doorashadan, waxaad labalaabi doontaa shayga oo waxaad ka heli doontaa hal kaar oo dheeraad ah dusha sare. Qaar ka mid ah hawlwadeenada kaararka ayaa xaddidi doona xulashadan, gaar ahaan kaararka leh wadar ’10’ ama ’11’. Khamaarka dheeraadka ah ayaa markaa lagu dhejiyaa sanduuqa ku xiga khamaarka asalka ah.
Kala qaybsan Tani waa ikhtiyaar la siinayo ciyaaryahanka haddii labada kaar ee ugu horreeya ee gacanta ay isku diin yihiin. Tusaale ahaan, waxaa lagaa qabtay labo 7s; waxaad gelin kartaa sharad labaad oo lamid ah tan koowaad ee sanduuqa sharadka. Ganacsadaha khamaarka ayaa markaa kala saari doona ama ‘kala qaybin’ doona kaararka, ka dibna wuxuu u qoondeyn doonaa kaarka labaad midka hore ‘7’.
Caymis . Caymiska waa la qaadan karaa haddii kaarka wajiga ee ganacsadaha uu yahay Ace. Tani waa sharad in ganacsadaha khamaarka uu haysto kaar 10-qiime leh oo dhameystiri kara blackjack. Doorashadan waxay bixin doontaa 2: 1, taas oo macnaheedu yahay in ciyaaryahanka uu heli doono $ 2 $ 1 kasta oo sharad ah oo la sameeyo.
In kasta oo ay jiraan sharciyo caadi ah oo lagu ciyaaro blackjack, maanka ku hay in qaar ka mid ah kuwa ka shaqeeya khamaarka ay sidoo kale wax ka beddeli karaan ama kala duwanaan karaan sharciyada. Waa tan eegno qaar ka mid ah kala duwanaanshaha ciyaarta caanka ah ee ay ciyaartoydu kala kulmi karaan khadka tooska ah.
Hoos u laab kadib marka lakala qaybiyo. Tani waa mid ka mid ah kala duwanaanshaha weyn ee xeerarka ee abaalmarin kara ciyaartoyda maaddaama ay jarayso geeska guriga celcelis ahaan boqolkiiba 0.13.
Dib-u-qaybsiga Aces oo la oggol yahay. Kasiinooyin badan, ciyaartoyga go’aansada inuu kala qaybiyo Aces wuxuu heli doonaa hal kaar oo loo yaqaan ‘Ace’ kasta. Haddiise laacibku helo Ace kale, hawl wadeenada qaar ayaa u oggolaan doona labada lamaane ee soo socda in la kala qaybiyo. Mar labaad, kala duwanaanshahan xeerarka ayaa sidoo kale ka caawin doona ciyaartoyda maaddaama geeska guriga laga jaray boqolkiiba 0,03.
Dhiibistii Hore. Haddii kaarka wajiga ee ganacsadaha khamaarka uu yahay Ace, wuu hubin karaa kaarka kale haddii ay tahay 10 abuuri karta blackjack ka hor ciyaarta sii wadista. Hadda, haddii ciyaaryahanka loo oggol yahay inuu dhiibo nus kala-shaandheynta asalka ah halkii uu ka ciyaari lahaa gacanta oo dhan ka hor intaan khamaarka ganacsadaha uusan hubin kaarka, markaa ficilkaas waxaa lagu magacaabaa dhiibis hore. Haddii si sax ah loo dhammeeyo, dhiibistii hore waxay hoos u dhigeysaa aqalka guriga boqolkiiba 0.624.
Dhiibistii Dambe. Tani waa kala duwanaanshaha dhiibistii hore iyo markan; ciyaaryahanka ayaa weli loo oggol yahay inuu ka tago kala bar sharad xitaa ka dib markii casino iibiyaha ayaa hore u hubiyaa kaarka kale.
Marka laga soo tago sharciyada aasaasiga ah ee xukuma blackjack, ciyaarta ayaa sidoo kale ku baaqeysa aadaab marka la ciyaarayo. Isla marka aad ku fariisato miiska blackjack, waa inaad sugto inta ganacsaduhu dhameystirayo gacanta ka hor intaadan u riixin sharadkaaga ganacsadaha casino oo aad dhahdo ‘Beddel Fadlan’.
Xaaladaha badankood, waa inaad isticmaashaa oo keliya calaamadaha markaad dhigeyso khamaarista mooyee in casino ay cayimay inaad sidoo kale miiska dul dhigi karto lacag Marka sharadka la dhammeeyo, gacmahaaga ka ilaali jibbaarada ciyaaraya illaa gacanta la dhammaystirayo.
Waxaa jira waqtiyo marka jajabyada lagu heli karo diimo kala duwan. Qaabka ugu habboon ee loo diyaarin karo kuwan ayaa ah in lagu sargooyo iyada oo ay ugu yartahay diinta.
Haddii aad ku ciyaareyso kaarar kala duwan, go’aamada ciyaarta waxaa lagugu soo gudbin karaa calaamadaha gacanta. Haddii aad ku ciyaareyso hal ciyaar ama laba-jibbaar blackjack ah oo kaararka si fool ka fool ah wax looga qabanayo, waxaad kaararka ka qaadan kartaa adigoo adeegsanaya hal gacan oo miiska ku xoqaya kaarka haddii aad rabto ‘Hit’.
Laakiin hadaad rabto ‘Istaag’, si fudud u rog kaarka. Waxaad kaararka u jeedin kartaa si fool-ka-fool ah daqiiqadda aad ‘Bust’ ama haddii aad rabto ‘kala-bax’, waxaad dhahdaa waxaad leedahay laba 7s Dhamaadka cayaartooyga, waa inaad u oggolaataa ganacsadaha inuu kaararka oo dhan ka rogo guntimaha.
Haddii aad kaliya tahay bilow kulankaan, waxaa fiican inaad ka fogaato kursiga ugu dambeeya miiska, dhanka bidix ciyaaryahanka. Ereyga luuqadda, waxaa loogu yeeraa ‘saldhiga saddexaad’, kani waa ciyaariyahanka loogu talagalay inuu sameeyo ciyaartii ugu dambeysay.
Mararka qaar, ciyaartoygan wuxuu kuleylka ciyaartoyda kale uqaadan doonaa qaadashada kaarka bustka ee ganacsadaha halkii uu istaagi lahaa. Haddii aadan maamuli karin kuleylka ama cadaadiska, si fiican u fadhiiso meel kale.
Blackjack waa ciyaar miis caan ah oo caan ku ah aqalkeeda la maamuli karo oo ah boqolkiiba 1
Ciyaartan, ciyaartooyda waxaa loola dhaqmaa laba kaar oo ujeedadu tahay inay helaan qiime gacan ah ’21’ ama ku dhow
Ciyaaryahan wuu istaagi karaa haddii uu ku qanco qiimaha gacanta, wuxuuna aadi karaa ‘Hit’ haddii uu doonayo inuu hagaajiyo qiimaha gacantiisa isagoo sawiraya kaar kale
Ciyaartoydu sidoo kale way labanlaabmi karaan, ku kala bixi karaan ama ku sharxi karaan caymis
Sida ciyaaraha kale ee miiska, ciyaartooyda waxaa laga filayaa inay u dhaqmaan si waafaqsan oo ixtiraam leh